N'oge a, site na nkwalite nka na ụzụ na ibi ndụ, ndị mmadụ na -eleba ahụike ha anya nke ọma. Yabụ enwere ọtụtụ ndị enyi sitere na ngalaba azụmaahịa dị iche iche, ha nwere ezigbo nchekwube maka ụlọ ọrụ ọgwụ ma chọọ itinye ego na ụlọ ọrụ ọgwụ, na -enwe olileanya ịme som ...
Maazị Prime Minister nke Tanzania gara ileta IVEN Pharmatech IV Solution Turnkey Project
Taa, obi dị anyị ụtọ na Maazị Prime Minista nke Tanzania gara ọrụ ntụgharị turnkey IV nke IVEN Pharmatech wụnyere na Dar es Salam. Maazị Prime Minister wetara ndị otu IVEN na ndị ahịa anyị na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ya ihe kacha mma. Ka ọ dị ugbu a, ọ toro oke mma Iven ...
Ntinye nke ngwaahịa IVEN - Tube mkpokọta ọbara
site na nchịkwa na 20-09-24
Ampoule - Site na nke edoziri nke ọma ruo na nhọrọ nhọrọ ahaziri nke ọma, tube mkpokọta ọbara oghere bụ ụdị ikuku ikuku nwere ike wepu ihe nwere ike nweta mkpokọta ọbara na mkpa ...
Kedụ maka ngwugwu akpa rọba na -abụghị pvc maka ngwọta IV?
Ampoule-Site na ọkọlọtọ ruo Nhọrọ Nhọrọ ahaziri nke ọma, akpa rọba IV na-abụghị PVC, na-edochi karama iko, karama plastik na ihe nkiri PVC nnukwu infusions, na-eme ka ikike ...
Ampoule - Site na ọkọlọtọ ruo Nhọrọ Nhọrọ ahaziri iche
Ampoule - Site na ọkọlọtọ ruo na nhọrọ nhọrọ ogo ahaziri ahazi, ampoules bụ ihe a na -ejikarị eme ihe n'ụwa niile. Ha bụ obere vials akara akara iji chekwaa nlele na ma mmiri mmiri ma nke siri ike ...
Ahịrị mmepụta ọkpọkọ ọbara anyị na -ere nke ọma n'ụwa niile
Na mkpokọta, ngwụcha afọ na -abụkarị oge ọrụ, ụlọ ọrụ niile na -agbagokwa ibu ụgbọ mmiri tupu ngwụcha afọ iji nye njedebe afọ 2019 nke ọma. jukwara. Naanị na njedebe ...
Kedu ihe e ji amata ụlọ ọrụ akụrụngwa ọgwụ China n'oge a?
N'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, site na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ ọgwụ, ụlọ ọrụ akụrụngwa ọgwụ ewepụtakwala ohere mmepe dị mma. Otu ndị isi ụlọ ọrụ akụrụngwa ọgwụ na -azụlite ahịa ụlọ nke ukwuu, ebe f ...
Igwe Ampoule À Coudre Led, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Igwe eji emejuola agịga, Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Igwe Ampoule À Coudre Singer, Disposable ntụtụ & agịga Production Line,